Dacwadda Codsiga - Weibo Electronic Co., Ltd.
Qalabka dareeraha danab ee AC
Hall Saamaynta Hadda Sensor
Dacwada Codsiga - Warshadaha Isgaarsiinta
Weibo Elektirooniggu waxay soosaartay sedex waji awood koronto oo dhameystiran, nooca tamarta tareenka dhowr-wareeg ah iyo dareeraha dareeraha dareeraha ee dareeraha korantada ee kormeerka awooda qolka qalabka kormeerka qalabka korontada, kormeerka qalabka qaboojiyaha, ilaalinta awooda isgaarsiinta, kormeerka batteriga iyo nidaamyada maaraynta . Taxane ah dareemayaal go'doomin awood u heellan, sida dareemayaasha saamaynta hall, dareemayaal gudbiye AC iyo batteriga dareemayaal iska caabin gudaha, waxaa loogu talagalay kalsooni sare, sax sare, go'doomin sare, jawaab celin badan iyo heerkulka ballaaran oo si gaar ah loo xoojiyay EMC iyo ilaalinta hillaaca. Isticmaalka korantada oo hooseeya iyo astaamo kale ayaa xaqiijinaya howlgalka lagu kalsoonaan karo ee nidaamka isgaarsiinta.
Codsiga warshadaha isgaarsiinta
Nidaamka la socodka fog ee tamarta deegaanka
Nidaamka la socodka isticmaalka tamarta qolka kumbuyuutarka saldhigga saldhigga
Awood isgaarsiinta, UPS
Nidaamka maaraynta la socodka batteriga
Horumarka degdegga ah ee wacyigelinta biyaha Shiinaha iyo warshadaha tamarta korontada, gaar ahaan hirgelinta Mashruuca Weecinta Biyaha ee Koonfurta-ilaa-Waqooyiga, shuruudaha loogu talagalay "kormeerka otomaatiga ah ee kormeerayaasha, dadka yar ee heeganka ku ah" iyo kormeerka nabadgelyada ee xarumaha ilaalinta biyaha ayaa sidoo kale ah sii kordhaya.
Kormeerka dhaqameed dhaqameedku wuxuu adeegsadaa dareeraha cadaadiska culeyska si uu si toos ah u cabbiro jiido / cadaadis si uu u xaqiijiyo ilaalinta culeyska culeyska mootada. Habkani ma aha oo kaliya mid adag in la rakibo oo la ilaaliyo, laakiin waxaa ka sii muhiimsan, qaybta ugu muhiimsan ee noocan ah dareemayaasha - cadaadiska Qaybaha xasaasiga ah ayaa aad ugu nugul khalkhalka deegaanka sida qulqulatada ay keento heerkulka bannaanka, waxyeelada ay keento gariirka, iyo gabowga da'da lakabka xabagta ee ay keento waqti dheer la isticmaalo. Intaas waxaa sii dheer, maxaa yeelay baaxadda xoogga ay ku cabbirayaan qalabka dalabku aad buu u ballaaran yahay, saxsanaanta nooca cabbirka xoogga tooska ah wuu hooseeyaa, wayna adag tahay in la buuxiyo shuruudaha dalabka goobta.
Dacwadda Codsiga - Nidaamka Dabagalka Fog ee Cilmiga ee Unugga Bamgareynta Si fiican
Iyadoo la horumarinayo tikniyoolajiyadda kontoroolka warshadaha, nidaamka telemetry-ka xakamaynta fogaanta wireless ayaa sidoo kale si ballaaran loogu isticmaalay ceelasha saliidda gudaha. Dareemayaasha ugu muhiimsan waxaa si kooban loogu sharaxay hoos:
1. Qaybta bamgareynta si wanaagsan u kormeerida awoodda (danab saddex-waji ah iyo soo-galinta hadda, soosaarka RS485)
Halbeeg isku-dhafan oo isku-dhafan oo isku-dhafan oo loogu talagalay gaar ahaan loogu talagalay bamgareynta ceelasha si loo beddelo gudbiyeyaasha analogga ah. Calaamadda ogaanshaha waa AC 3-waji danab iyo 3-waji hadda; Wax soo saarku waa 3 danab (qiimo wax ku ool ah), 3 hadda jirta (qiimo wax ku ool ah), awood firfircoon, awood falcelin, isir awood leh, awood firfircoon, iyo xog falcelin iyo xog soo noqnoqota. Wax soo saarku wuxuu ka heli karaa qiimaha caadiga ah ee lambarka cabbirka korantada ee looga baahan yahay is-gaarsiinta, umana baahna RTU inay sameyso sambal-sameynta AC.
2.Saraamid xamuul go'an oo go'an (xaddiga: 0 ~ 150kN; dareenka soo-saarka: 1mVV)
Ka dib in ka badan toban sano oo la isticmaalay warshadda soo saarista saliidda, si joogto ah ayaa loo hagaajiyaa; naqshad buuxda oo xiran iyo biyo-la'aan si loo daboolo isticmaalka cimilada oo dhan; fiilooyin ku habboon si loo isku halleyn karo; hawl fudud oo ammaan ah; soo-saar joogto ah iyo is-weydaarsi dhammaystiran.
3. Cadaadis cadaadis (kala duwan: laga bilaabo 0 ~ 10Kpa ilaa 0 ~ 500Mpa, soo saar: nidaamka laba-silig ee caadiga ah)
Badeecadani waxay isticmaashaa qaybta go'doominta saliidda ka buuxsantay ee la soo dhoofiyay ama jirka oo dhan ee birta ah ee culeyska soo saara si ay isugu daraan hannaanka isdhexgalka gobolka-adag iyo tikniyoolajiyadda kala go'idda. Qalabka silsiladda faafida waxaa lagu rakibay god dhululubo ah oo saliid silikoon ah laga buuxiyo, iyada oo loo marayo sheyga birta ka sameysan ee birta ka sameysan iyo Dahaarka dibedda ayaa ka soocaya miisaanka cabirka. Wax soo saarku wuxuu ku shaqeyn karaa deegaanno qalafsan.
4. Dareeraha barakaca xaglo (inta udhaxeysa: 0 ~ 100, 0 ~ 180, 0 ~ 270, 0 ~ 340 [wax soo saar joogto ah] 0-5V)
Badeecadani waa shidma lagu cabiro booska wareega ee shay oo leh xiriir qumman oo udhaxeeya soosaarka danab iyo xaglaha wareegga usheeda dhexe. Waxaa lagu gartaa saxnaan sare, nolol dheer, habsami u soo saar wanaagsan iyo wixii la mid ah.
5. Dareemka heerkulka (heerkulka Phead1000 soosaarka caabiga)
Xidhmada PT1000 ee la keenay; caabbinta cadaadiska ma guurto ah ayaa ka weyn 30Mpa; waqtiga jawaab celinta heerkulka waa dhakhso; qaabka dareeraha ayaa lagu go'aamin karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha isticmaalaha; heerkulka shaqada: -50 ° C ~ +400 ° C, fasalka saxnaanta A.
6. Kormeerka laba-geesoodka ah ee infrared (saddex kormeeraha qalabka digniinta)
Aaladda waxqabadka sare leh ee laba-daaqad leh oo leh teknolojiyadda ugu sarreysa maanta amniga goobta waxay ka kooban tahay aalad-adoon laba-koox ah oo sax ah qalab lagu ogaanayo infrared iyo wareegga ka-hortagga muraayadda iyo dijitaal caqli-gal ah.
No 98 Youxian East Road, Degmada Youxian, Mianyang 621000, Shiinaha